Bit By Bit - परिचय - 1.4.1 Readymades र Custommades
डिजिटल युगमा सामाजिक अनुसन्धान Readymades, Custommades र शक्तिशाली संकर समावेश हुनेछ।
सबै भन्दा प्रसिद्ध urinals को एक कहिल्यै 1917 मा खरिद गरिएको थियो, र त्यो मूत्रालय केही तरिका, डिजिटल युगमा सामाजिक अनुसन्धान धेरै समान मा छ। प्रश्न मा मूत्रालय फ्रान्सेली कलाकार मार्सेल डुचैम्प द्वारा खरिद गरियो। यो खरिद गरेपछि डुचैम्प आर scribbled " यसमा मट Name 1917 "र त्यसपछि आफ्नो सिर्जना छहरा (चित्रा 1.2) नाम। यसको प्रारम्भिक स्वागत मनतातो भए तापनि, छहरा आधुनिक कला सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण टुक्रा को एक मानिन्छ गर्न आएको छ यसलाई मौलिक मान्छे कला सोच्न कसरी परिवर्तन किनभने (Higgins 2004) । छहरा एक रेडीमेड, एउटा उदाहरण हो जहाँ कलाकार कुरा देख्नुहुन्छ भनेर संसारको त्यसपछि कला रूपमा repurposes पहिले नै अवस्थित छ।
चित्रा 1.2:। मार्सेल डुचैम्प द्वारा छहरा छहरा जहाँ कलाकार पहिले नै त संसारमा अवस्थित छ रचनात्मक कला लागि यो repurposes कुरा देख्नुहुन्छ एक रेडीमेड, एउटा उदाहरण हो। हालसम्म, डिजिटल युगमा सामाजिक अनुसन्धान को धेरै अनुसन्धान भन्दा अन्य केही उद्देश्य लागि सिर्जना गर्ने repurposing डाटा संलग्न छ। अल्फ्रेड Stiglitz द्वारा फोटो, 1917. स्रोत: विकिमिडियामा ।
सामाजिक अनुसन्धान को धेरै डिजिटल युगमा, अझै सम्म, यस्तै संरचना, एकदम छैन हुनत नै परिणाम संग थियो। अनुसन्धानकर्ताहरूले कि डिजिटल रेकर्ड आफ्नै उद्देश्यका-यस्तो फोन लग, डिजीटल पदहरू, र सामाजिक मिडिया रूपमा डाटा-सक्छन् सामाजिक अनुसन्धान को लागि repurposed हुन लागि सरकारको र व्यवसायीहरूको द्वारा सिर्जना बुझे छन् (Lazer 2015) । अर्को शब्दमा, डिजिटल युगमा सामाजिक अनुसन्धान को धेरै डाटा Readymades लागि एक खोज भएको छ।
तथापि, जस्तै सबैभन्दा कलाकारहरूको छैन वरिपरि Readymades लागि देख हिंड्न गर्छन्, विगतमा भन्दा सामाजिक अनुसन्धानकर्ताहरूले छैन वरिपरि repurposed गर्न सकिन्छ कि डेटा को लागि हिंडे छन्। बरु, बरु डाटा सञ्चालित रहेको, विगतमा सबैभन्दा सफल सामाजिक अनुसन्धान प्रश्न सञ्चालित छ। त्यो एक शोधकर्ता एउटा प्रश्न थियो र त्यसपछि फेला परेन वा प्रश्नको जवाफ आवश्यक डाटा सिर्जना छ। काम को यस अन्य शैली देखाउँछ गर्ने कलाकार माइकलएन्जेलो छ। उहाँले दाऊदको एक मुर्ति त उहाँले आफ्नो कृति (चित्रा 1.3) सिर्जना गर्न संगमरमर को एक ब्लक संग laboring3वर्ष बिताए बनाउन चाहन्थे दाऊद रेडीमेड छैन। यो एक Custommade छ।
Michaelangelo द्वारा दाऊदले दाऊदले जानीबुझी सिर्जना कला एउटा उदाहरण हो;: आंकडा 1.3। यो एक Custommade छ। यो शैली यस्तो छहरा रूपमा Readymades (चित्रा 1.2) संग भिन्नताहरूलाई। डिजिटल युगमा सामाजिक अनुसन्धान Readymades र Custommades दुवै समावेश हुनेछ। Jörg Bittner Unna द्वारा फोटो, 2008. स्रोत: विकिमिडियामा ।
डिजिटल युगमा सामाजिक अनुसन्धान Duchamps दुवै र Michelangelos, दुवै Readymades र Custommades समावेश हुनेछ। यो पुस्तक यी दुई दृष्टिकोण, अधिक महत्वपूर्ण कुरा, अन्वेषण, र तिनीहरूले एक शक्तिशाली संकर मा संयुक्त सकिन्छ कसरी देखाउन हुनेछ। उदाहरणका लागि, यहोशू Blumenstock र सहयोगिहरु भाग डुचैम्प र भाग माइकलएन्जेलो थिए; तिनीहरूले मोबाइल फोन कल डाटा (एक रेडीमेड) repurposed र तिनीहरूले आफ्नै सर्वेक्षण (एक Custommade) सिर्जना गरियो। Readymades र Custommades यो blending तपाईंले यो किताब भर देख्नुहुनेछ कि ढाँचा छ।